Dafcadii 19,aad Ee Kaqalinjabisa kuliyada Dr. Cabdimajiid Xuseen - Cakaara News
Dafcadii 19,aad Ee Kaqalinjabisa kuliyada Dr. Cabdimajiid Xuseen
Jigjiga(CN) Isniin 14ka September 2015, Xaflad qalinjabin ah oo ay si meeqaam sare leh usoo agaasintay kuliyada Macalimiinta ee Dr Cabdimajiid Xuseen ayaa ka dhacday madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan. Iyadoo ay ka soo qaybgaleen masuuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Madaxwayne ku-xigeenka ahna Wasiirka Waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan, Maareeyaha kuliyada Macalimiinta ee Dr. Cabdimajiid Xuseen mudane Maxamuud Axmed Nuur, Wasiirka Adeega Shacabka iyo Kobcinta Maamulka DDSI marwo Maajida Maxamed Maxamuud, waalidiin, ardaydii qalin jabinaysay, qurba joog iyo waliba marfi sharaf kale.
Qalinjabintan oo ah tii 19,aad ayaa waxaa kaqalinjabiyay 1,345 macalimiin ah oo baranayay waxbarashada xiliga xagaaga. Waxayna ka qalinjabiyeen heerka aqoonta ee diploma iyo certificate.
Furitaankii xafladan ayaa waxaa ka hadlay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayntii u hambalyeeyay ardaydan qalinjabisay una mahadceliyay waalidkii iyo macalimiintii ku soo tabcay inay maanta qalinjabiyaan. Waxaa kale oo uu iyana ugu hambalyeeyay ardayda qalinjabinaysay dadaalkii iyo wakhtigii ay galiyeen in ay waxbarashadooda dhamaystaan. Isagoo madaxwaynuhu kula dar-daarmay in ay shacabkooda si wadaniyad, daacadnimo, xilkasnimo ku dheehan tahay ugutaan waajibaad kooda shaqo si ay shacabkooda uga samatabixiyaan jahliga. Waxaa intaa dheer, in madaxweynuhu sigaar ah ugu mahadceliyay maamulka kuliyadda, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda kobcinta awooda iyo adeega shacabka DDSI dadaalka iyo gacan siinta ay kagaysteen in ardadani maanta qalinjabiyaan.
Wuxuu kaloo madaxwaynuhu u mahadceliyay ciidanka gaarka ah ee DDSI Liyu boolis oo guulo wax ku ool ah ka gaadhay ladagaalanka xarakada argagixisada ah ee Al-qushaash oo qorshaynaysay in ay qaraxyo qorshaysan kafuliyaan deegaanka sidii ay ugaleen kenya oo kale markii laga war helayna loogu tagay saldhigyadoodii gudaha dalka soomaaliya ayna ka soo hoyiyeen guulo ay ku mutaysteen shahaado sharaf ay siiyeen ciidanka difaaca qaranka oo ay ka garab dagaalamayeen ayna sharaf usoo hoyiyeen dalkeena itoobiya.
Maareeyaha kuliyada macalimiinta ee Dr. Cabdimajiid Xuseen mudane Maxamuud Axmed Nuur ayaa isna si qoto dheer uga warbixiyay taariikhda kuliyadu soo martay iyo heerka ay maanta taagan tahay iyo waliba jihooyinka horumarineed ee kuliyada wuxuuna hambalyeeyay ardaydii qalinjabinaysay.
Dhanka kalana ardaydii qalinjabinaysay ayaa balanqaaday inay shacabkooda ugu adeegi doonaan si wadaniyad, daacadnimo iyo xilkasnimo leh.